Matxafka Diyaaradaha ee Freeman Army - Safarka Qoyska | Seymour, IN | Xarunta Booqdaha ee Degmada Jackson
Bogga ugu weyn / Matxafka / Matxafka Airfield ee Freeman Army
Freeman Field waxaa la hawlgeliyey Dec. 1, 1942, waxaana loo adeegsan jirey in lagu tababaro duuliyeyaasha Mareykanka si ay u duuliyaan diyaaradaha matoorka mataanaha ah. Matxafka Freeman Field Army Airfield wuxuu ku yaalaa sagxadda Freeman Field, oo ah bakhaar la isticmaalay xilliyadii Field.
Matxafku wuxuu ka kooban yahay ogeysiisyo qalin-jabineed, casuumaad qoob-ka-ciyaare, labis, moodello diyaaradeed, sawirro iyo khariidadaha aagga. Waxaa jira qaybo diyaarad ah oo lagu aasay salka, oo ay ku jiraan qaybta dabada ee diyaarad dagaal oo Jarmal ah, oo wali leh astaantii Nazi.
Matxafka Ciidanka Cirka ee Freeman Field Army Airfield wuxuu ku yaal 1035 "A" Avenue ee Seymour. Waxay u furan tahay booqashooyinka 10 am ilaa 1 pm Sabtida iyo ballanta. Wixii macluumaad dheeri ah, ka wac Xafiiska Madaarka Freeman garoonka 812-522-2031 ama 812-521-7400. Booqo Matxafka Freeman Army Airfield.
Matxafka Township PershingMatxafka